Xplora X5 Play, famakafakana, tombony ary vidin'ny smartwatch ho an'ny ankizy | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | 12/08/2021 20:00 | hevitra
Androany ao amin'ny Androidsis dia manana vokatra izay be fangatahana izahay tato ho ato. Smartwatch tena feno ary misy tombony azo amin'ny ambaratonga. Saingy amin'ity tranga ity dia natao ho an'ny mpihaino tena manokana izy io. Afaka nanandrana ny Xplora X5 Play, ny smartwatch tsara indrindra ho an'ny ankizy eny an-tsena, ary lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra.
Teknolojia manapaka, voalohany, natao ho an'ny mpanatrika olon-dehibe izy io, ary "takatra" aza. Ny tolotra goavana eo amin'ny tsena dia nahatonga azy io ho azo idirana bebe kokoa. Y ny fahatongavan'akanjo azo entina Izy ireo dia nanao izay hahafahanay mitafy azy io. ny isan'ny fampiasana sy fampiharana mampisy dikany ireo karazana fitaovana ireo.
1 X5 milalao, ny smartwatch ho an'ny ankizy fa tsy kilalao
2 Volavola sy fomban'ny X5 Play
3 X5 Play bateria sy famaritana
4 Fa maninona no gadget tsara indrindra ho an'ny zanakao?
5 Tabilao famaritana ara-teknika
X5 milalao, ny smartwatch ho an'ny ankizy fa tsy kilalao
Rehefa miresaka momba ny fitaovana ho an'ny ankizy isika, amin'ny ankapobeny, dia miantso ireo fitaovana ambany-afovoany izahay. Namboarina tamin'ny fitaovana tsy dia voaporofo tsara. Ary saika isaky ny mandeha "fitaovana" teknolojia natao ho an'ny ankizy dia akaiky kokoa ny kilalao foana fa tsy zavatra hafa. SAINGY Tsy izany no izyNa dia natao hampiasain'ny ankizy aza ny lalao X5, dia olon-dehibe ny tena mpampiasa farany.
Ankoatra ny smartwatch voalohany ho an'ny ankizy, izany hoe, ny X5 Play dia torontoronina, amin'ny fomba malalaka sy amin'ny asa maro hafa, ho fitaovana ho an'ny ray aman-dreny hahalala amin'ny toerana rehetra ny toerana misy ny zanany. Noho io antony io, ary na eo aza ny zava-misy fa ny vidiny dia mihoatra ny salanisan'ny gadget ho an'ny ankizy, dia mahaliana tokoa ho an'ireo izay mandoa azy ireo matetika. Afaka mihazona izany ianao izao Lalao Xplora X5 aterineto amin'ny Amazon.
Volavola sy fomban'ny X5 Play
Ny famolavolana fitaovana natao ho an'ny mpihaino ankizy azo antoka fa zava-dehibe izany raha irintsika ho manintona izy ireo ary tian'izy ireo ny mitafy azy. Fa hanombohana dia mila maneho hevitra amin'ny antsipiriany roa amin'ny fahatakarantsika isika, ny ratsy. Ny voalohany dia izay el ny fisehoana ivelany dia maotina kokoa noho izay antenaintsika, fehikibo vita amin'ny fingotra mainty ary misy loko tokana manodidina ny dial.
Ny antsipiriany hafa hitantsika fa ratsy dia ny habeny an'ny smartwatch. Tena tsara ho an'ny ankizy ampiasaina izany. Bebe kokoa lehibe sy matevina na dia ny ankamaroan'ny fitaovana natao ho an'ny olon-dehibe aza. Ao amin'ny hatotan-jaza dia mahavariana loatra ny habeny ary tsy misy tsy hita.
Raha mijery ny lafiny ara-batana fotsiny isika dia mahita a dial square miaraka amin'ny haben'ny 1,4 santimetatra miaraka amin'ny famahana ny 240 x 240 pika. Mahatsiaro ho voaro tsara izy sisiny misy rafi-plastika nohamafisina. Afaka mahita tsara ny efijery sy ny singa rehetra ao aminy isika, na dia tara-pahazavana aza.
Ny iray amin'ireo singa mampiavaka azy amin'ny sisa amin'ny fifaninanana dia ny eo anoloana, ny Xplora X5 Play, misy fakantsary 2 Mpx. Zavatra izay mampiavaka azy ary izany dia manome ny mpampiasa (zaza) sy ny ray aman-dreny, bonus fiarovana amin'ny fotoana rehetra. Afaka maka sary ilay zaza miaraka amin'ny famantaranandro, na mpitaiza avy lavitra amin'ny alàlan'ny App avy amin'ny finday.
Vidio ny Lalao Xplora X5 aterineto amin'ny Amazon
Ny sisa amin'ny vatana ny fitaovana, toy ny lozika ny fiheverana ny mpihaino kendrena azy, dia ny fvita amin'ny plastika. Fitaovana ambony tohina sy mahatohitra tohika izany dia mampanantena ny hahatanty ny hafainganam-pandehan'ireo kely indrindra amin'ny trano.
Eo amin'ny ilany havia no misy ny Kardan'ny SIM.
Eo amin'ny ilany ankavanana hitantsika a bokotra mikasika ary ny mpandahateny sy mikrô ho an'ny antso.
X5 Play bateria sy famaritana
Ny fizarana bateria dia manome antsika angona somary mifanohitra. Nahita a fiampangana bateria somary avo ho an'ny smartwatch, indrindra raha ampitahaintsika amin'ny maodely hafa izay azontsika notsapaina. Fa ny fanjifana angovo avo lenta amin'ireo singa fitaovana dia mahatonga ny lNy fahaleovan-tena izay omeny dia tsy mahafa-po mihitsy.
Hitantsika araka izany ny a Bateria 800 mAh, izay amin'ny fampiasana "ara-dalàna" ny fitaovana miaraka amin'ireo fiasa mavitrika rehetra, dia manolotra a fizakantena iray andro monja. Fahaleovan-tena izay Mandritra ny roa andro dia maharitra izy io raha tsy hesorintsika ny GPS ary alefantsika ny maody mijoro, zavatra tsy misy dikany ...
Ho an'ny rindranasao hitety Android OS, manisa iray processeur fantatry ny mpanaraka toy ny Qualcomm 8909W. Ny fiasan'ny asany dia marina amin'ny fotoana rehetra ary mitondra tena tsara amin'ny fampiasa rehetra izy. Manana a Fahafaha-mitahiry 4GB.
Fa maninona no gadget tsara indrindra ho an'ny zanakao?
Efa nilaza taminay izahay fa ny X5 Play no smartwatch misy fitaovana tsara indrindra eny an-tsena. Ary noho ny tombony azony dia lasa izy fitaovana mety hanomezana ny ray aman-dreny fiarovana fanampiny tadiavin'izy ireo. Izahay dia miresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fananana a geolocator misy GPS Izany dia hampahafantatra antsika tsara sy amin'ny fotoana rehetra ny toerana misy ny zaza tsy ampy taona. Azonao atao izao ny mividy ny Lalao Xplora X5 aterineto amin'ny Amazon amin'ny vidiny tsara indrindra.
Ny fiarovana natolotry ny rafitra GPS dia ampiharina amin'ny alàlan'ny fampiasana angona finday satria ny X5 Play koa dia manana ny azo atao ny mampiditra karatra SIM. Miaraka amin'ilay fampiharana mihitsy afaka mametraka perimeter fiarovana sy fanairana fandaharana aza isika raha sendra miala amin'ny faritra voafantina ny mpampiasa.
Tokony ho fantatsika ihany koa fa noho ny fahafaha-mampiasa karatra SIM, ny famantaranandro afaka miasa irery tsy mila smartphone miantso na mandray antso. Izany dia Fandrakofana 3G sy 4G. Ary azontsika atao ny mampiditra ao amin'ny famantaranandro a phonebook hatramin'ny fifandraisana 50.
modely Lalao X5
efijery 1.4 santimetatra
vahaolana 240 X 240
processeur Qualcomm 8909W
Rafitra fandidiana Android OS
Fanoherana rano / vovoka Fanamarinana IP68
Fakan-tsary 2 Mpx
Conectividad 3G sy 4G
fizakantena Eo anelanelan'ny 1 sy 3 andro (araky ny fampiasana)
lafiny X X 16.21 9.91 7.01 sm
lanja Gramin'ny 60
vidiny 159 euros
Rohy mividy Lalao Xplora X5 aterineto
Toerana misy ny fitaovana mampiasa teknolojia GPS.
Mety hampiasaina SIM hanao sy / na handray antso.
Fakan-tsary ampidirina ao aloha mba hampiasaina lavitra.
Habe mihoampampana ho an'ny mombamomba ny mpampiasa izay nikendrena azy.
Fahaleovan-tena ratsy nomena ny refy sy ny fihenan'ny batterie.
Vidiny ambonimbony noho ny salanisa.
Lalao Xplora X5 aterineto
Navoaka tamin'ny: 12 Aogositra 2021
Fanovana farany: 12 Aogositra 2021
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » X5 Play, famakafakana, fampisehoana ary ny vidiny
Boobs ao an-tanàna mankalaza ny faha-2 taonany
Ny finday tsara indrindra 10 tamin'ny volana Aogositra 2021